Iifilitha zeefoto ezikwi-Intanethi zohlobo lwe-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Disemba 29, 2018 0 IiCententarios 596
Namhlanje ndifuna ukukubonisa iinkqubo ezikuvumela ukuba uhlele imifanekiso usebenzisa iifilitha. I Iifilitha zeefoto Zisetyenziselwa ukulungisa ukuhanjiswa kombala womfanekiso, ukuthungwa kwawo okanye ukufaka iziphumo.
Ngale ndlela ufumana imifanekiso ekumgangatho ophezulu, kunye nempembelelo enkulu kunye nokuthinta lomntu okanye iinkcukacha ezichanekileyo zefoto yasekuqaleni okanye imodeli ebonisiweyo.
Ngale ndlela ufumana iifoto zakho ziqhelekile, zibangela ifuthe elingakumbi, kwaye ufumane uninzi lwezithuthi, abalandeli kunye nezinto ezithandwayo kwi-Instagram nakwezinye iinethiwekhi zentlalo.
Kwaye unokwenza yonke into ngokukhawuleza!
Nalu ukhetho lwezixhobo ezilungileyo ezifumanekayo kwi-Intanethi. Zonke bakhululekile kwaye inokusetyenziswa, nokuba ku umgca okanye ngokuyifaka kwikhompyuter yakho. Ezinye zinokufakwa kwizixhobo ze-Android neze-iOS.
Eyona ndlela ilungileyo yokucoca iifayile ze-intanethi
1 Eyona ndlela ilungileyo yokucoca iifayile ze-intanethi
1.2 Iziphumo ezigqibeleleyo- Iifilitha ze-instagram ezikwi-Intanethi
1.3 Iziphumo ze-On1
1.5 I-Picfull -Enye yezona zihluzo zibalaseleyo kwiifoto ezikwi-intanethi
1.7 Iifilitha zamahala zemifanekiso kunye nePicmonkey
1.10 I-Pixlr Express
1.11 Umhleli weefoto
1.13 Iziphumo ezilula zeFoto
Esi sicelo sivumela ukuba uhlele imifanekiso ethathwe kwi-intanethi ngekhamera yakho yewebhu okanye igcinwe kwikhompyuter yakho okanye kwenye imithombo yeendaba yokugcina.
Unokukhetha kuluhlu olubanzi lwe iifayile, Iziphumo (ezinje ngokubengezelayo, izibane, ingqele, iinkwenkwezi) kunye nezinto ezininzi ezikhethwa ekubumbeni umfanekiso.
Nje ukuba ugqibezele inkqubo yokuphinda uphinde, unokugcina ikopi yomfanekiso ohleliweyo. Njengoncedo, kufuneka kukhankanywe ukuba ayixhasi zonke iifomati zemifanekiso. Ungasisebenzisa esi sicelo ngqo kwiwebhusayithi yazo simahla.
Ungayisebenzisa njengesicelo se-Facebook, siyifake kwiKhompyuter yakho (yeWindows, Mac) okanye kwisixhobo sakho se-Android okanye se-iOS.
Sebenzisa i-Pixlr-o-matic ekwi-Intanethi
Unokusebenzisa imifanekiso ekhululekile Ukuvavanywa kwezi zixhobo zokusebenza
Iziphumo ezigqibeleleyo- Iifilitha ze-instagram ezikwi-Intanethi
Isicelo siquka uluhlu olupheleleyo lwe iifayile, ukwenziwa y iifom. Inika ubuqili kunye neenkcukacha zokuhlela. Ikuvumela ukuba uphinde ufake iifoto kwi-intanethi kwiindawo ezithile zomfanekiso. Ukongeza, inika ithuba lokusebenzisa iifilitha ezininzi ngaxeshanye kunye nokwandisa igalari yeefilitha kunye noburhabaxa.
Ungayifaka kwiKhompyuter yakho (yeWindows), ukuyikhuphela kwiSoftonic. Ingasetyenziswa njenge Ulwandiso lweFotohop kunye neGumbi lokukhanya.
Umphuhlisi uguqulile igama lesi sicelo kwi-ON1 EMPUMA, oku kungenelelo elilandelayo kuluhlu lwethu.
Ndincoma Iziphumo ze-ON1, ukuvela kwezinto ezigqibeleleyo. Esi sixhobo sikunika iintlobo ezininzi zeefayile kunye neefilita kunye nonxibelelwano olunononophelo kakhulu.
Ikuvumela ukuba udale imeko yokuhlela engqongileyo, ehambelana nohlobo lwendawo oya kupapasha kuyo umfanekiso. Unokukhuphela lo mhleli ubalaseleyo kwiPC yakho (yeWindows, Mac) kwiwebhusayithi ye-ON1, umphuhlisi wayo.
Njengendlalifa elungileyo kwiziphumo ezigqibeleleyo, ungayisebenzisa njengokongezwa kweFotohop, Lightlight kunye neApile Aperture.
Khuphela Iziphumo ze-On1
Ukuba ungumntu othanda ukujongeka retro kunye neefoto zangoku ngekhamera yePolaroid, lo mhleli ulungiselelwe wena. Kuya kufuneka utsalele umfanekiso kwiwindows yesicelo kwaye kwimizuzwana embalwa iya kubonakala ityhilwe ngePararoid eyinyani, ukongeza ukukwazi hlela imifanekiso ye-polaroid onayo ..
Ineefilitha zombala, onokuthi uzifake kwinxalenye yomfanekiso, kunye nokwenzeka kokuhlengahlengisa ubungakanani kunye nolunye uhlengahlengiso.
I-Picfull -Enye yezona zihluzo zibalaseleyo kwiifoto ezikwi-intanethi
Esi sisicelo esikuvumela ukuba usebenzise inani eliqwalaselwayo leefilitha kwimifanekiso onayo kwimidiya yakho yogcino.
Umhleli ukuvumela ukuba uhlengahlengise useto ukuba aluhambelani nolindelo lwakho. Kwaye ekugqibeleni, ungagcina ikopi yefoto yakho ephindaphindiweyo. Ungayisebenzisa kwi-intanethi ngokundwendwela le dilesi ilandelayo:
Sebenzisa umhleli we-intanethi uPicfull
Esi sixhobo sinika uluhlu lweefilitha kunye neziphumo. Ukongeza, inemodeli ezininzi zesakhelo, kwaye ikuvumela ukuba ungeze isicatshulwa kwiifoto onazo ezininzi iifonti ezingekho mthethweni kunye ne-avant-garde.
Unokukhetha umbala wombhalo kwizinto ezininzi ezizezinye. Nokuba ubungakanani okanye isikhundla sesicatshulwa asiqwalaselwanga kodwa ukuqengqeleka Luhlobo olunokwenzeka.
Iifilitha zamahala zemifanekiso kunye nePicmonkey
I-PicMonkey sisicelo esikhoyo gcina iifoto kwi-Intanethi ngeefilitha ezininzi, izakhelo kunye neziphumo. Eyona misebenzi yobuchule ifumaneka nge-akhawunti ye-premium.
Akuthandabuzeki ukuba le app yenye ye Abahleli beefoto abakwi-Intanethi, ukusetyenziswa kulula kakhulu kwaye kuyindalo. Ukongeza, ivumela ukhetho i collage, ukwenza iifoto zemizuzwana ngemizuzwana eyahlukeneyo.
Sebenzisa i-PicMonkey kwi-intanethi
Ngumhleli ogqibeleleyo kwi-Intanethi. Inika uluhlu olubanzi lweefilitha kunye nemisebenzi yokuchukumisa, yobungcali kwaye imnandi.
Ukongeza, ivumela iifoto zezityalo kwi-intanethi, yenza ubungakanani kwakhona kwaye ujikeleze iifoto Yenza ukuba ifumaneke kumsebenzisi iindidi ezahlukeneyo zeefonti zokutsala ngamehlo, kunye nezitikha ezonwabisayo (okanye izitikha) zokufaka kwimifanekiso.
Ayifuni ukhuphelo okanye ukufakelwa.
Sebenzisa iRibbet ekwi-Intanethi
I-PHO.TO sesinye isixhobo sokucoca iifoto ezikwi-Intanethi, ukunika iifoto zakho a icandelo le iiposikhadi, kunye neziphumo ezahlukeneyo ezinkulu, imihlobiso.
Ukongeza, ikuvumela ukuba wenze imisebenzi ye Ukubuyiselwa kobuso ebusweni online: mhlophe amazinyo, susa amehlo abomvu kunye nokuphelisa i-acne.
I-Pixlr Express ngumhleli ogqibeleleyo, enemisebenzi eyahlukeneyo yohlengahlengiso, izihluzo, uchukumiso-up, izihombiso, nganye ineparamitha ezilungelelanisiweyo ezinika umsebenzisi inqanaba eliphezulu lokuguquguquka kokuhlelwa komfanekiso.
Phakathi kwazo, ukubakho kokudibanisa okubhaliweyo, okusemthethweni nangokungathinteleki, ukutshintsha ubukhulu bayo, isikhundla kunye nokujikeleza kwayo.
Ukongeza, inika ukhetho lokuhlengahlengisa umgangatho wefoto xa uyigcina (kwaye, ke, ubungakanani obuya kuhlala kwidiski, ukhetho oluncedo kakhulu kwimifanekiso emiselwe ukulayishwa kwenethiwekhi).
Njengombhalo obalulekileyo, unokukhetha njengemvelaphi yefoto yakho iflegi yamazwe aliqela. Ungayifaka kwisixhobo sakho se-Android ngokulula.
Sebenzisa i-Pixlr Express ekwi-Intanethi
Esi sicelo, ngaphandle kokuba negama lantlandlolo, linika ukhetho olunomdla kakhulu: usike, ujikeleze, uphinde uphinde, inani elikhulu leefonti, zombini ezisesikweni nezingekho mthethweni, kunye nephepha elikhulu lemifanekiso, izihombiso, imilo kunye nezitikha .
Njengenxalenye yokuhambelana okukhulu, isebenza ngamacwecwe, aluncedo kakhulu ekuhleleni imifanekiso, ngakumbi ukuqanjwa okwenziwe ngezinto ezahlukeneyo.
Esi sicelo sivumela ukuba usebenzise inani elikhulu lokucoca kwaye Iziphumo ze-instagram kwi-intanethi kwiifoto zakho, kunye nohlengahlengiso kwisibane, umahluko, indawo yokugcina izinto, phakathi kwemisebenzi enokukuvumela ukuba ufumane esona siphumo sombala.
Uncedo lwayo olukhulu kukudityaniswa kweenkonzo ze-intanethi ezinje nge-Facebook, Flickr kunye nePicassa, ukuze wabelane ngemifanekiso yakho nabahlobo kunye nabalandeli kwimizuzwana.
Iziphumo ezilula zeFoto
Esi sesinye sezicelo ezilula kululuhlu lwethu. Ikuvumela ukuba uguqule imibala, ukukhanya, ukuchasana, kunye nokunika ukuthinta kwakudala kwiifoto. Kwaye ine repertoire enomdla yeefilitha.
Ngaba ucinga ukuba sithethile ngayo yonke into malunga Iifilitha zeefoto ezikwi-intanethi Uhlobo lwe-Instagram lweefoto? Ngaba uyasazi esinye isicelo esingekho kuluhlu lwethu?
Unokufunda noku Khuphela imifanekiso ekwi-intanethi kwi-intanethi Ngenye imisebenzi.
Jonga icandelo lethu leendaba kwibhlog ukuze ubone iqhinga okanye iinkqubo onokuthi ungazazi okwangoku.
Kwaye njengokuba i-youtuber ihlala isitsho: "Kungandinceda kakhulu ukuba uyathanda, uphawule okanye wabelane."